Yangon Chief Urges Eco-Friendly Investments | Myanmar Business Today
Home Investment & Finance Yangon Chief Urges Eco-Friendly Investments
Yangon Chief Urges Eco-Friendly Investments
Yangon Chief Minister U Phyo Min Thein called for environmentally-friendly and responsible investments into the region during remarks at the February6‘Green Economy Green Growth’ seminar at UMFCCI.
“We have carried out mangrove forest restoration initiatives in Yangon Region by planting around 30,000 acres of mangrove trees as we want to fence the Mottama coastal area with mangrove forest,” said the Chief Minister. “This will help prevent natural disaster and climate change not only for people in Yangon but also for the whole country.”
“Furthermore,” he continued, “we are also focusing on smokeless industries while making sure to mitigate the consequences of smokestack industries.”
As Yangon isamajor economic hub, its development is relevant for the country’s development, he added.
The Yangon Regional Investment Committee has approved 71 foreign investment proposals and four local investment proposals, securing $130.282 million in foreign investment and K6.315 billion in local investment.
“The World is facing natural disasters because of environmental damages. Therefore, when working on economic development, we need to preserve the environment and collectively collaborate for sustainable development,” said Dr. Myo Thant, vice president of UMFCCI.
He also called for prevention of deforestation and bamboo cover losses due to infrastructure and urban development.
The Yangon Regional Government plans to organize an investment forum this year, following similar events hosted by various regional and state governments to showcase investment opportunities in their areas. It is also carrying out development projects in pursuit of four goals: To preserve Yangon’s historic heritage sites; go green; buildalivable city; and serve as an economic hub for the country.
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မပျက်စီးဘဲတာဝန်ယူမှှု တာဝန်ခံမှှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဝင်ရောက်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်တွင် UMFCCI ၌ ပြုလုပ်သည့် Green Economy Green Growth (GEGG) ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ ဒီရေတောတွေ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ ဒီရေတော ဧက သုံးသောင်းလောက်ပြန်လည် တည်ဆောက်နေပါတယ်။ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့တစ်ကြောကို ဒီရေတောတွေနဲ့ ကာရံထားနိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါက ရန်ကုန်မြို့ပြမှာနေထိုင်နေတဲ့ သူတွေရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုတွကို ပြန်လည် ထိန်းညှိနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေမှာ မီးခိုးမထွက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဖြစ်နိုင်ဖို့နဲ့ မီးခိုးထွက်နိုင်မယ် ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒီမီးခိုးကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အချက်အချာကျသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံး ဝင်ရောက်ထားပြီး လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်သုံးလတာအတွင်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၇၁ ခု ၊ နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၄ ခု အထိ တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီက ခွင့်ပြုထားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုပမာဏအနေဖြင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အမေရိန်ကဒေါ်လာ ၁၃၀.၂၈၂ သန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျပ်ငွေ ၆၃၁၅ သန်း အသီးသီးရှိထားသည်။
“ လက်ရှိဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်လည်း ဖြစ်နေကြတာ အများကြီးရှိနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ရာမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး စနစ်တကျ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ” ဟု UMFCCI ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးသန့်က ပြောသည်။
မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ များစွာတည်ဆောက်ခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာများဖြစ်သော သစ်တောများ ပြုန်းတီးခြင်း ၊ ဝါးပင်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းများကို စနစ်တကျဖြင့် ကြိုတင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၎င်းက ပြောသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်များအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ချပြဆွေးနွေးခြင်းများဖြစ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင်လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှု ဆွေးနွေးပွဲ ဖိုရမ်တစ်ခုကို ကျင်းပပြုလုပ်ရန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် မြို့ပြအမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရန်၊ နေချင်စဖွယ်မြို့ဖြစ်လာရန် နှင့် စီးပွားရေးမြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်လာရန် ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်လေးချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
Previous articleUNDP, Ooredoo Join Forces Behind Innovation Hub
Next articleMyanmar Eyes Exporting Corn to Thailand